प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा अब मात्रै २ विकल्प -
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा अब मात्रै २ विकल्प
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार राजधानीको ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा डायलासिस गरिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिंगापुरमा गरिएको प्लाज्माफेरेसिसपश्चात् पहिलोपटक डायलासिस गरिएको हो ।
नियमित परीक्षणका लागि भन्दै बुधबार बिहानै अस्पताल गएका ओलीको रगतमा क्रियाटिनिन र पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा बढेको देखिएपछि डायलासिस गरिएको थियो । मिर्गौला रोग विशेषज्ञका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीले नियमित डायलासिस वा मिर्गाैला नै प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मिर्गाैलाको डायलासिस प्रक्रिया थालिएपछि नियमित रूपमा सातामा तीनपटक डायलासिस गर्नुपर्ने मिर्गौला रोग विशेषज्ञ बताउँछन् । एकपटक डायलासिस गर्दा ४ घण्टा समय लाग्छ ।
मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषि काफ्लेका अनुसार प्लाज्माफेरेसिस गरिसकेपश्चात् डायलासिस गर्नुले मिर्गाैलाको अवस्था स्वस्थ नभएको देखिन्छ । उनले भने, ‘प्लाज्माफेरेसिस गरेको केही समयभित्रै डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले मिर्गाैला ठीक नभएको संकेत गर्छ ।’
अस्पताल प्रशासनले भने बुधबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे र नेफ्रोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट मेडिसिन विभागकी अध्यक्ष प्रा.डा. दिव्या सिंह शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको बताइएको हो । अस्पतालले उहाँको आवश्यक परीक्षण पूरा भएपछि बुधबार राति वा बिहीबारसम्ममा डिस्चार्ज गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली ग्रान्डी अस्पताल पुगेका थिए । ११ वर्षअघि भारतको अपोलो अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको १८ देखि २७ साउनसम्म सिंगापुरमा उपचार भएको थियो । उपचारका क्रममा ओलीको मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडीको मात्रा केही बढी देखिएको थियो । एन्टिबडी बन्ने प्रक्रिया रोकी बनेको एन्टिबडिज शरीरबाट बाहिर निकालिएको थियो ।
चिकित्सकका अनुसार व्यक्तिको शरीरमा प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाविरुद्ध शरीरले उत्पादन गरेको हानि गर्ने तŒवलाई एन्टिबडी भनिन्छ । त्यसले प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलालाई हानि पु¥याउँछ । क्रियाटिनिन बढ्नु भनेको शरीरले एन्टिबडी बनाउनु हो । अधिकांश एन्टिबडी मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिमा देखिन्छ । एन्टिबडी हटाउने उपचार प्लाज्माफेरेसिस गरेर सिंगापुरबाट फर्किएका ओली सिस्नुपानी नेपालले आयोजना गरेको देउसीभैलो कार्यक्रममा झन्डै २ घण्टा सहभागी भएका थिए । यसअघि उनलाई चिकित्सकले लामो समयसम्म भीडभाडमा नबस्न र स्वास्थ्यको गम्भीर ख्याल राख्न सुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा जम्मा भएको एन्टिबडीलाई प्लाज्माफेरेसिसको माध्यमबाट नष्ट गरिएको थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उनले नियमित औषधि खाँदै आएका छन् । सो औषधिका कारण प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउने भएकाले बेलाबेलामा उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रगत, सुगर, रक्तचाप, क्रियटिनिनलगायतको परीक्षण भएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल लगिएको बताए । उनले भने, ‘उहाँको अवजरबेसन भइरहेको छ । नियमित चेकजाँचका लागि अस्पताल जानुभएको हो ।’ उपचारमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहको नेतृत्वमा टोली खटिएको छ ।
कोरोनाले फर्काएको खुसी: युएईमा १० वर्षको जे’ल सजाय पाएका यी युवाले सात महिनामै पाए आममाफी (भिडियो)
स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सांसद तुलाचनको प्रश्न –‘कोरोना रोक्न मैले तपाईंलाई दिएको मह खै ? (भिडियो)